Marooko waxay xiisaynaysaa nidaamka difaaca Iron Dome ee Israa'iil - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Marooko waxay xiisaynaysaa nidaamka difaaca Iron Dome ee Israa’iil
Marooko waxay xiisaynaysaa nidaamka difaaca Iron Dome ee Israa’iil
Marooko waxa ay xiisaynaysaa in ay iibsato nidaamka difaaca gantaalaha ee Iron Dome ee Israel si ay si wanaagsan ugu hubiso difaaca gidaarka ciidda Saxaraha, laakiin sidoo kale aagagga madaniga ah iyo kuwa millatariga ee dabeecada xasaasiga ah leh,” sida lagu sheegay warbixin ku soo baxday warbaahinta digitalka Morocco Le Desk.
Israa’iil waxay isticmaashaa Iron Dome si ay uga hortagto gantaalada riddada gaaban iyo madaafiicda looga baqo inay ku soo dhacaan meelaha dadku ku badan yahay, iyadoo heerka difaacoodu uu gaadho ku dhawaad ​​90 boqolkiiba.
baytariyada iyo interceptors-ka waxa soo saaray Rafael Advanced Defense Systems iyo Israel Aerospace Industries.
Dalka Waqooyiga Afrika ku yaalla ayaa caadi ka dhigay xidhiidhkii uu la lahaa Israa’iil, taasoo qayb ka ahayd heshiiskii Abraham ee uu Maraykanku dhexdhexaadiyay sannadkii hore. Taas beddelkeeda, Maraykanku waxa uu aqoonsaday sheegashada Morocco ee ku saabsan Saxaraha Galbeed.
Dhawaan, Marooko waxa uu khilaaf kala dhexeeyay dalka ay jaarka yihiin ee Aljeeriya, kaas oo xidhiidhka diblomaasiyadeed u jaray bishii Ogosto.
Aljeeriya waxay taageertaa dhaqdhaqaaqa xornimada ee Jabhadda Polisario ee dhulka lagu muransan yahay ee Saxaraha Galbeed. Todobaadki hore Aljeeriya ayaa Morocco ku eedeysay in ay saddex qof oo rayid ah oo Aljeeriya ah ku dileen dhulka ay maamusho Polisario ee Saxaraha Galbeed.
Isagoo ka hadlayay Sabtidii, Boqorka Morocco Mohamed VI ayaa sheegay in madax-banaanida Saxaraha Galbeed ay tahay mid aan gorgortan laga geli karin.”
Rabat waxay dhistay darbi ciid ah oo dhererkiisu yahay 1,700-mile (2,700 km) kaas oo dhex mara Saxaraha Galbeed iyo koonfur-galbeed ee Marooko si uu u kala saaro aagagga ay Marooko haysto iyo dhulka ay maamusho Polisario.
Previous articleIsrael oo bilaawday daad gureynta qoysaska diblumaasiyiinteeda ku dhaqan Itoobiya
Next articleXisbiyada siyaasadeed ee Mali waxay dalbanayaan in xukuumadda talada haysa ay ixtiraamto jadwalka kala guurka